1xBet Ukubhaliswa - Indlela Yakha I-Akhawunti Entsha ye-1XBET?
Ungabhalisa kanjani ku-1xBet
1xBet Bhalisa nge 1 Chofoza
1xBet Bhalisa ngefoni
1xBet Bhalisa nge-E-mail
1xBet Bhalisa nge Social Media
1XBET UMHLAHLANDLELA WOKUBHALISA KA-2022
Izinyathelo zokubhalisa ku-1xBet
1xBet inkinobho yokubhalisa itholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesayithi. Ukuvula i-akhawunti ku-1xBet kuyinqubo evamile, ongeke uhlangabezane nanoma yibuphi ubunzima. Uma ubheka phezulu kwesokudla sesayithi, uzoqaphela inkinobho yokubhalisa eluhlaza. Izokuyisa kuphaneli yesistimu, okuzokunikeza ezinye izindlela ezine - "Ukuchofoza okukodwa", "Ngenombolo yocingo", "Nge-imeyili" noma "Amanethiwekhi omphakathi kanye nesigijimi". Bona okwengeziwe mayelana nalokhu ngakunye ukuze ukhethe indlela efaneleke kakhulu yokuvula i-akhawunti yakho.
1xBet ukubhaliswa Quick ngokuchofoza okukodwa
1. I "Ukuchofoza Okukodwa" inketho ikuvumela ukuthi ubhalise ngokoqobo ngokuchofoza okukodwa kwegundane noma iphedi yokuthinta. Odinga ukukwenza ukukhetha uhlobo lwemali oluncamelayo, cacisa izwe lakini bese ufaka ikhodi yephromo uma unayo.
2. Chofoza u- "Bhalisa" inkinobho futhi manje usuzoba ne-akhawunti.
3. Esimweni esinjalo, inkundla ikwakhela igama lomsebenzisi ngendlela yekhodi enezinombolo eziyisishiyagalombili kanye nephasiwedi enezinhlamvu eziyisishiyagalombili. Ukuze kube lula kuwe, isistimu ikunikeza ukuthi ugcine le datha ngokuyithumela ku-imeyili yakho noma ngokuyigcina njengefayela lombhalo noma isithombe.
4. Uma ukhetha le nketho, uzoshiya ukuqedwa kwedatha yephrofayili yakho ngokuhamba kwesikhathi.
5. I-1xBet izokuvumela futhi ukuthi udlale usebenzisa lezi ezibizwa kuphela "isevisi" imininingwane, kodwa qaphela ukuthi usazodinga ukubhalisa imininingwane yakho ukuze ukhiphe imali ku-akhawunti yakho uma uwinile. Uma unesikhathi, iseluleko sethu ukuthi sikwenze manje.
1XBET UKUBHALISA NGOKU-1 CLICK
Ukubhaliswa Ngenombolo Yocingo Ku-1xBet
1. Ungathola nokungena ngemvume okukhiqizwa ngokuzenzakalelayo ngefoni. Ukwenza lokhu, udinga ukukhetha inketho yesibili - "Ngocingo" bese ufaka inombolo yakho.
2. Isistimu ibona izwe okulo futhi ifaka ikhodi yezwe ngokwayo. Uma usuthumele imininingwane, uzothola imininingwane yakho nge-SMS.
3. Lapha futhi igama lomsebenzisi ngendlela yekhodi yezinombolo kanye nephasiwedi ehlanganisa izinombolo nezinhlamvu.
4. Uma usunazo lezi, ungazisebenzisa ukuze ungene.
1UKUBHALISA XBET NGEFONI
1xBet Ukubhaliswa nge-E-mail
Uma ufisa ukugcwalisa imininingwane yakho, kufanele ukhethe inketho yesithathu - "Nge-imeyili". Lapha inkundla izokuvumela ukuthi uzibekele imininingwane yakho. Uzodinga ukufaka ulwazi olulandelayo: Izwe, Iphasiwedi, I-imeyili, Inombolo yocingo, Imali, Amagama, Ikhodi yephromo (uma unayo).
Lena inguqulo ephelele kakhulu yenqubo yokubhalisa. Izokuvumela ukuthi ucacise igama lomsebenzisi nephasiwedi oyifunayo ukuze ungakhumbuli inhlanganisela ekhiqizwa ngokuzenzakalela.
1UKUBHALISA XBET NGE-E-mail
1xBet Ukubhalisa nge-Akhawunti Social Media
1UKUBHALISA KWE-XBET NGEZINKUNDLA ZOKUPHAKATHI
Bhalisa nge-1xBet Mobile
Ake sibheke ukuthi ungabhalisa kanjani ngeselula ye-1xBet. Landela izinyathelo ezimbalwa ezilandelayo futhi ekugcineni uzoba ne-akhawunti yeselula edaliwe.
1.Vakashela leli kheli elilandelayo: https://1xbet.com/zu/mobile/
2. Phezulu uzobona izinkinobho ezimbalwa. Esesibili esiluhlaza sithi "Bhalisa" uzokusa efomini lokubhalisa.
3. Uma usuyichofozile, uzobona ezimbalwa ongakhetha kukho kuye ngendlela yokubhalisa oyikhethayo.
Ngaphambi kokubhalisa nge-1xBet
Ithimba lethu lihlala leluleka abafundi bethu ukuthi bafunde imigomo nemibandela yakho konke okunikezwayo ngokuningiliziwe. Okufanayo kusebenza emithethweni ekuwebhusayithi ye-1xBet. Njengoba uqaphela, ngaphambi kokuthi ubhalise, inkundla ngokwayo izokucela ukuthi ufunde kabanzi mayelana nemithethonqubo. Lapho uzothola imithetho nezibopho zakho njengomsebenzisi futhi ufunde kabanzi mayelana nokuzibophezela kukabhuki kuwe.
Nakuba imigomo nemibandela ijwayelekile, kusengumqondo omuhle ukubabheka ukuze uhlale unolwazi.
Ibhonasi yokubhalisa ku-1xBet
Uma ubhalisa nge-1xBet, uzoba nenketho yokucacisa kusistimu ukuthi iyiphi iphromoshini oyikhethayo – 1xBet ibhonasi yokwamukela ezemidlalo noma umnikelo wokuqala wekhasino. Kunguqulo ephelele yesayithi, iphaneli yokukhetha itholakala kwesokunxele sezinkambu zokubhalisa.
Uma ungakaqiniseki ukuthi iyiphi iphromoshini kokubili oyikhethayo, isistimu izokunikeza ithuba lokubhalisa bese icacisa iphromoshini oyifunayo. Uzokwazi ukwenza lokhu kumenyu yephrofayela yakho lapho wenza idiphozithi yakho yokuqala.
Okubalulekile ukukwenza Uma Sesine-akhawunti ye-1xBet?
Kungakhathaliseki ukuthi iyiphi indlela yokubhalisa oyikhethayo, uma usudlule kule nqubo, uzobe usunayo i-akhawunti ongadlala kuyo kuwebhusayithi ye-1xBet. Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi inqubo ilula uma iqhathaniswa nabanye ababhuki. Kubalulekile nje ukukhumbula imininingwane ukuze ukwazi ukungena ngaphandle kwezinkinga. Okunye futhi ukuthi inkampani ikunikeza izindlela ezimbalwa zokubhalisa, futhi unenketho yokusebenzisa i-akhawunti yakho kunethiwekhi yokuxhumana nabantu ukuze uzigcinele ubunzima bokugcwalisa imininingwane.
Noma, uma ufuna, ungafaka imininingwane yakho yomuntu siqu ku-akhawunti yakho ngemuva kokubhalisa uqobo. Lokhu kwenziwa kusuka ku- "Iphrofayela yomuntu siqu" imenyu yesistimu, ozoyibona ekhoneni eliphezulu kwesokudla sesayithi uma usungenile ku-akhawunti yakho. Uma uyichofoza, uhlu lokudonsela phansi luzovela phambi kwakho, lapho udinga ukukhetha inketho yesine - "Iphrofayela yomuntu siqu".
Uzobona ibhokisi ukuze ufake imininingwane yakho. Uzodinga lesi sinyathelo uma ufisa ukukhipha imali ku-akhawunti yakho noma ubambe iqhaza kunoma yiziphi izinyuso zikabhuki.
1xBet Ukubhaliswa | 1xBet Download